Sony – AsiaApps
ကမ္ဘာ့ resolution အမြင့်ဆုံး ဖုန်းကင်မရာ image sensor ကိုထုတ်ပြလိုက်တဲ့ Sony
July 24, 2018 July 24, 2018 MoonSmartphone NewsNo Comment on ကမ္ဘာ့ resolution အမြင့်ဆုံး ဖုန်းကင်မရာ image sensor ကိုထုတ်ပြလိုက်တဲ့ Sony
Wow! Wow! Asiaapps ကပရိသတ်ကြီးရေ! Sony ရဲ့ ကမ္ဘာ့ Resolution အမြင့်ဆုံး camera sensor အကြောင်းကို သိပြီးကြပြီလား??? ကမ္ဘာအမြင့်ဆုံး camera sensor ဆိုတော့ သူ့မှာ resolution ဘယ်လောက်အထိရှိမယ်လို့ထင်မိကြလဲ…
Sony Xperia နဲ့ XZ2 Compact ဆီကို ရောက်လာပြီဖြစ်တဲ့ Google Lens ရဲ့ feature အသစ်
June 4, 2018 June 4, 2018 MoonSmartphone NewsNo Comment on Sony Xperia နဲ့ XZ2 Compact ဆီကို ရောက်လာပြီဖြစ်တဲ့ Google Lens ရဲ့ feature အသစ်
Google Lens ကတော့ Sony Xperia နဲ့ XZ2 Compact တို့ရဲ့ မူရင်း ဖုန်း ကင်မရာapp တွေဆီကို နယ်မြေချဲ့ထွင်လာပြန်ပါပြီ။ Google Lens ကို activate ပြုလုပ်ဖို့အတွက် Play…
May 24, 2018 May 24, 2018 WilliamSmartphone NewsNo Comment on စမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်မှုကို ရပ်တန့်သွားဖို့အလားအလာရှိနေတဲ့ Sony
Sony ရဲ့ CEO နေရာကို Kenichiro Yoshida ဟာဧပြီလက ဝင်ရောက်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ Sony ရဲ့ Plan တွေကလည်းတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ အင်္ဂါနေ့တုန်းက Yoshida ဟာ Sony ရဲ့ လာမယ့် ၃…
Sony Xperia XZ2 နဲ့ XZ2 Compact တို့ရဲ့ စျေးနှုန်းပိုင်းနဲ့ Specification အချို့တို့ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ ရက်နေ့မှာပဲ Xperia blog ကနေတဆင့်ထွက်ရှိလာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဉီးဆုံးအနေနဲ့ Xperia XZ2 ရဲ့…